Ogaden News Agency (ONA) – Sacuudiga oo Markii Ugu Horaysay Haweeneey Safiir u Magacaabay.
Sacuudiga oo Markii Ugu Horaysay Haweeneey Safiir u Magacaabay.
Posted by Dayr	/ February 25, 2019
Dowlada Sacuudiga ayaa markii ugu horeysay dalka Maraykanka u direysa Safiir dumar ah oo ka tirsan qoyska Boqortooyada Sacuudiga.
Safiirada cusub ee Sacuudiga u fadhida Maraykanka ayaa loo magacaabay Amiirada Reema Bint Bandar Bin Sultan Bin Cabdulcasis oo iyadu horey wax ugu soo baratay dalka Maraykanka.
Safiirada cusub ayaa bedali doonta Safiirkii hore Khalid Bin Salman oo ahaa nin la dhashay Dhaxal-sugaha Maxamed Bin Salman. Wuxuuna Khalid isaga baxay dalka Maraykanka kadib markii uu dhacay dilkii Suxufi Jamal Khashoggi dhamaadkii sanadkii tagay.
Khalid Bin Salman ayaa la rumeysan yahay inuu si weyn uga shaqeeyey dilkii Khashoggi isagoo wakiil ka ahaa walaalkiis Dhaxal-sugaha Maxamed Bin Salman. Sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa la sheegay inay hayaan telefono ay kuwada hadleen labada nin oo ka tashanayey khaarajinta Suxufi Khashoggi sida ay horey u qoreen jaraa’idka Maraykanka. Maxamed Bin Salman ayaa walaalkiis Khalid u magacaabay Wasiir kuxigeenka Gaashaandhiga.
Sacuudiga ayaa xiligan cadaadis xoogan ka saaran yahay Kongareeska (Baarlamaanka) Maraykanka oo ay hada kusoo biireen xildhibaano dhalinyaro oo ay kamid tahay Xildhibaanada Ilhan Cumar oo iyadu si weyn u dhaliilsha Sacuudiga iyo Israel, waxaana la filayaa in Safiirada cusub ee Sacuudiga ay noqon doonta wajiga cusub oo ay Boqortooyada Sacuudiga dooneyso inay ka gado dalka ay xiriirka dhaw leeyihiin ee Maraykanka.
Waxaa xusid mudan Maxamed Bin Salman oo sheegay inuu u ogolaan doono haweenka Sacuudiga inay gawaarida kaxeystaan, ayaa dhinaca kale weli xabsiga ku haya dhamaan dumarkii u ololeyn jiray xoriyada haweenka Sacuudiga arrintaasi oo ay marar badan cambaareeyeen hay’adaha xaquuqul Insaanka.